Arabia Saodita · Novambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita · Novambra, 2012
Tantara mikasika ny Arabia Saodita tamin'ny Novambra, 2012
Lalàna 25 Novambra 2012
Ejipta 23 Novambra 2012
Lany ho filoham-pirenena amerikanina fanindroany i Barack Obama nefa ahoana ny fandraisan’ireo mpampiasa aterineto any amin’ny tontolo arabo izany? Indro misy pitiny kely tamin’ireo bitsika tao amin’ny Twitter taorian’ny fahalaniany indray. Mizarazara ny fihetseham-po, raha faly noho ny politika ivelan’i Etazonia any an-toerana ny ankabeazany, ny hafa kosa dia faly satria nandresy i Obama.
Ady & Fifandirana 18 Novambra 2012
Tamin'ny Septambra lasa teo, nanoratra izahay mikasika ny fitorevahana ora 24 tsy mbola nisy toa azy nataon'ny fianakavian'ireo gadra tsy nandalo fitsarana. Nohazaina sy nosamborina ireo mpanao fihetsiketsehana nony farany. Halina, namoaka didim-pitsarana manameloka ny 19 tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ilay Saodiana mpanao gazety, Iman al-Qahtani, tao amin'ny Twitter. sazy didy miantona fikaravasiana 50-90 ary fonja ho an'ny 14 amin'izy rehetra, ahitàna ilay olona nitondra sakafo ho an'ireo mpano hetsi-panoherana. Tonga dia ampiharina ny sazy raha toa ry zareo ka mbola mandray anjara indray aminà fihetsiketsehana. Ireo dimy hafa dia mbola hotsaraina aoriana kely.
Lalàna 12 Novambra 2012
Androany vao maraina no notontosaina ny fotoam-pitsarana fahadimy mikasika ny raharaha mahavoarohirohy ireo mpiaro ny zon'olombelona Mohammad Al-Qahtani sy Abdullah Al-Hamid. Nisisika ny mpitsara tamin'ny fotoam-pitsarana farany teo fa tsy azon'ny olona atrehina ny fotoana, saingy nolàvin'izy roa lahy mpikatroka ankitsirano izany. Niova hevitra araka izany ny mpitsara ka azon'ny daholobe atrehina indray ny...
Ejipta 05 Novambra 2012
Media sy Fanoratan-gazety 02 Novambra 2012